Iimpawu ezintsha zePad Air Air ye-5, i-iPad Mini 6 kunye ne-iPad 9 zihluziwe | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 29/07/2021 16:00 | iPad, Izaziso
Imijikelezo yokubonisa i-Apple ebinayo kuyo yonke imbali yayo ichaphazelekile kule minyaka idlulileyo. Kude kube kudala, uSeptemba ibiyinyanga ka iPhone ngelixa u-Okthobha wayeyinyanga ye-iPad. Nokuba yeyiphi na inyanga yokubonisa, oko kucacile kukuba I-Apple isebenza ekuhlaziyeni lonke uluhlu lwee-iPads phakathi kwazo kukho I-iPad Air 5, i-iPad Mini 6 kunye ne-iPad yesizukulwane se-9. Ngapha koko, umthengisi waseTshayina uveze ezinye zeempawu ezinokuthi ekugqibeleni zibandakanye ezi zixhobo.
Oku kunokuba yi-iPad Air 5 entsha, i-iPad Mini 6 kunye ne-iPad 9
Ulwazi luvela kwindawo eyaziwayo yaseJapan, IMacOtakara, Efumene ukuvuza okukhulu kumthengisi waseTshayina owaziwayo kwihlabathi lobuchwephesha. Enkosi ngokuvuza sinokuqinisekisa, kunye namanye amarhe angaphambili, ukuba I-Apple isebenza ngokuhlaziya i-iPad yayo yoMoya, i-iPad Mini kunye ne-iPad kwizizukulwana zabo ezizayo.
Ngokwolwazi olunikiweyo, IPad Air 5 Iya kubonisa uyilo olufana nolwesithathu-intshi ye-11-intshi ye-Pro Pro. Oko kukuthi, sinokungena sele sikwi-intshi ezili-11 ukongeza kwi yazisa ngenkqubo yekhamera emibini: i-engile ebanzi kunye ne-engile ebanzi. Ngokumalunga ne-chip eza kudityaniswa, iya kuba yile I-A15 chip yeBionic, ubhuti we-A15 oza kuphatha i-iPhone 13. I-chip iya kuhambelana ne-5G mmWave. Okokugqibela, i-iPad Air 5 inokubandakanya izithethi ezine.
Amarhe aqhubeka naye I-iPad yesizukulwane se-9, owona mzekelo usisiseko wamacwecwe athengiswayo nguApple. Akukho zixhobo zintsha zifakiweyo kwesi sixhobo iminyaka eliqela. Mhlawumbi iApple iyafuna Gcina uyilo kude kube ngu-2022 okanye ngaphezulu, Kwaye injongo kukubonelela nge-iPad enexabiso eliphantsi kwaye enamandla.
Ekugqibeleni, i Isizukulwana sesi-6 se-iPad Mini Iya kuba nescreen esingu-8,4-intshi, kunye ne-A14 Bionic chip, yiyo le nto i-iPad Air ephetheyo ngoku. Kwinqanaba loyilo, into efanayo iyenzeka njenge-iPad yoqobo, Akusayi kubakho lutshintsho kude kube semva ko-2022.
Kukwakhona ukuba nayiphi na iPads ekuxoxwe ngayo ukuza kuthi ga ngoku ibandakanye nefayile ye- Isikena seLiDAR. Nangona kunjalo, bayayala le nto, besithi iApple iyazisa kuphela kwezi mveliso ziyinxalenye yoluhlu lwe 'Pro', kuzo zombini ii-iPhones kunye nee-iPads.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » Amanqaku amatsha avuza ikamva le-iPad Air 5, i-iPad Mini 6 kunye ne-iPad 9